Mitariha fitarihana bebe kokoa miaraka amin'ny mpamorona pejy fitobiana Landingi ho an'ny WordPress | Martech Zone
Alarobia, Martsa 3, 2021 Alatsinainy, May 16, 2022 Douglas Karr
Na dia mampiditra endrika ao amin'ny pejy WordPress fotsiny aza ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tsy voatery ho pejin-tsambo manatsara sy manova olona be izany. Ny pejy fitobiana dia matetika manana endri-javatra maro sy tombontsoa mifandraika amin'izany:
Fanelingelenana kely indrindra - Hevero ny faran'ny làlana misy anao izay faran'ny làlana misy fanelingelenana kely. Ny fanamoriana, sidebars, footers ary singa hafa dia mety hanelingelina ny mpitsidika anao. Ny mpanamboatra pejy fananganana dia mamela anao hanome làlana mazava mankany amin'ny fiovam-po tsy misy fanelingelenana.
Integrations - Amin'ny maha-mpitarika anao niova fo teo amin'ny pejin'ny fipetrahanao dia zava-dehibe ny hatolotra ny olona sahaza AZY na ampidirina anaty fampielezan-kevitra hikolokoloana azy ireo ho lasa mpanjifa.
Fitsapana A / B / x - Ny pejy fitobiana dia tokony hanana ny singa tsirairay ho toy ny variant izay azo zahana sy refesina mora foana hanampiana ireo mpivarotra manatsara ny taham-pitan'izy ireo.
Funnels - Ny fahaizana mandika ny dia ny mpividy azo refesina dingana fandefasana varotra manampy anao hahatakatra ny fihetsiky ny mpampiasa anao mba hahafahanao mampitombo ny firotsahana an-tsehatra isaky ny dingana.
hitovian'ny - Ny pejy fipetrahana iray dia tsy mandeha tsara ary koa ny pejy fitobiana marobe. Ny fahombiazan'ny fanaovana kopia sy ny fanaingoana ny pejy fidirana tsirairay ho an'ny tsena kendrena tadiavinao hovaina dia hitondra fifandonana fanampiny… ary amin'ny farany dia fidiram-bola.
Landingi manome ireo vahaolana rehetra ireo sy maro hafa. ny izay hitanao no azonao (Fandrarian-dahatsoratra marevaka) misintona sy mitete, mpanorina pejy tsy misy kaody tsy misy codec dia ahafahanao mihodina haingana, manao kopia ary mamorona pejy fananganana mahavariana avy amin'ny fanangonana modely 300+… mitahiry fotoana be dia be ho anao.
Ny sehatra dia ahafahanao manao fitsapana A / B tsy manam-petra ary mametraka motera fanolorana mihitsy aza mba hampifandraisina bebe kokoa amin'ny pejin-javatra mavitrika ny pejinao.
Landingi misy koa mpandrindra fampielezan-kevitra matanjaka hanombohana sy hamaranana ny fampielezan-kevitrao amin'ny fotoana mandeha ho azy.
Araraoty ny fampidirana 40+, ny analyse, ny fanaraha-maso ary ny fitaovana kendrena hanatsarana ny fahombiazan'ny ezaka ara-barotra ataonao. Ny Pass dia mitarika saika amin'ny marketing mailaka na fitaovana CRM ampiasainao, ampidiro amin'ny vahaolana toy izany MailChimp, HubSpot, SalesForce, ary Zapier.
Popup Triggered Landingi
Raha te-hamoaka fiovam-po bebe kokoa ianao, ny fipoiran'ny popup miorina amin'ny fikasana hivoaka, ny fotoana eo amin'ny tranokala, na ny halalin'ny scroll dia afaka manatsara ny fahafahanao misambotra an'io fironana io na farafaharatsiny mahazo ny mailaky ny mpitsidika hanosika azy ireo hanao fampielezan-kevitra. Manolotra izany fotsiny i Landingi!
Plugin amin'ny pejy fampidirana WordPress
Matetika ny vahaolana amin'ny pejy fitobiana dia mitaky anao hamily lalana amin'ny alàlan'ny subdomain iray, saingy Landingi manolotra WordPress Plugin izay ahafahanao mamoaka ny pejy fidirana mivantana ao anatin'ny anao WordPress toerana!
Atombohy ny fitsapana maimaim-poana amin'ny pejy fitodiana Landingi WordPress anao
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Landingi ary ampiasaiko ireo rohy ireo mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: fivoahanafivoahana ny fikasanampamorona pejy fanangananaplugin pluginplugin plugin wordpress landing pagepejy pejylandingipopup nipoitrapejy fitobiana wordpressplugin WordPress